Accueil > Gazetin'ny nosy > Siteny : In’efatra nantsoin’ny BIANCO
Siteny : In’efatra nantsoin’ny BIANCO
Araka ny loharanom-baovao azo antoka dia in’efatra izao no misy fiantsoana hoan’ingahy Siteny Randrianasoloniaiko avy amin’ny BIANCO (birao mahaleon-tena miady amin’ny kolikoly). Mahakasika ny vola tao amin’ny Antenimierampirenena ao Tsimbazaza no antony itadiavana ity depiote ity izany. Izany faintsoana izany dia mahakasika ny asa maha kestora azy tao amin’ny antenimierampirenena teo aloha izay voalaza fa misy lavaka be ny vola tao Tsimbazaza tao. Misy ihany koa raharaha ara-bola mahakasika ny fitantanam-bola ity COM ity raha ny loharanom-baovao hatrany.
PRMP(olona mpiandraikitra ny tsenambarotrin’ny fanjakana) izay mpiara-miasa aminy tao amin’ny Antenimierampirenena no efa fantatra fa nidoboka any amponja ao Antanimora volana vitsy lasa izay.
Mahakasika ny raharaha fanadihadiana ataon’ny fitsarana na ny mpanao famotorana ny depiote dia tsy maintsy mandalo eny amin’ny antenimierampirenena izany aloha ka raha mahazo alalana amin’ity andrimpanjakana ity dia azo tanterahana ny famotorana izany. Io no sakana lehibe hahitana ny marina izao.
Ny loharanom-baovao hatrany no milaza fa tsy manaiky ny hanaovana fanadihadiana azy ny depiote namany, toa ny raharaha izay mahavoarohirohy mpiasam-panjakana ambony tokony hanaovan’ny HCJ (fitsarana avo) fanadihadiana koa.
Resabe eto amin’ny firenena ny volabe zarazarain’i Siteny Randrianasoloniaiko etsy sy eroa ireny toa ny zavatra tsy nisasarana ireny. Mila vola tsy mazava ao.
Ho hita eo indray ny tohiny.